सपनामा विभिन्न खाले महिला आइरहन्छन् ? यी हुन् संकेत - IAUA
सपनामा विभिन्न खाले महिला आइरहन्छन् ? यी हुन् संकेत
ramkrishna November 23, 2016	सपनामा विभिन्न खाले महिला आइरहन्छन् ? यी हुन् संकेत
सपना हामी सबैले देख्छौं । कुनै सपना वास्तविक जीवनमा नै मेल खान्छन् भने केही सपनाको सांकेतिक अर्थ हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रमा सपनाको विषयमा थुप्रै मान्यताहरु प्रचलित छन्, जसको अनुसार सपनामा हामी जे देख्छौं त्यो भविष्यमा हुनसक्ने घटनालाई संकेत गर्दछ । यदि कोही मानिसले आफ्नो सपनामा महिलालाई विभिन्न रुपमा देख्छ भने त्यसको पनि केही अर्थ हुन्छ जसबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सुन्दर चरा देखेमाः
यदि कोही युवतीले सपनामा राम्रो चरा देखेमा उनको आफ्नो प्रेमीसँग चाँडै नै विवाह हुनसक्छ ।
हिराको गहना देखेमाः
यदि कोही महिलाले सपनामा हिराको गहना देखेमा उनको विवाह कुनै धनी व्यापारीसँग हुनसक्छ ।
Previous Previous post: धन, इज्जत र स्वास्थ्यका लागि लगाउनुस् यस्ता रूद्राक्ष
Next Next post: सपनामा यी २५ चिज देख्नुभयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ ! सपनामा जुका देख्नु